Ogaden News Agency (ONA) – Weerarada CWXO ay ku naafeynayaan cadawga iyo kuwa adeega oon kala joogsi lahayn
Weerarada CWXO ay ku naafeynayaan cadawga iyo kuwa adeega oon kala joogsi lahayn
Posted by ONA Admin	/ September 12, 2011
Dagaaladii cuslaa ee CWXO ay ku qaadayeen cadawga iyo kuwa loo kireeyay in dhufayska looga dhigo cadawga ayaa guud ahaan gobolada dalka ka socda. Dagaaladaas oo ah kuwa u dhaca si joogto ah ayaa sababa la xidhiidha baaxadda dalka iyo CWXO oo ka hawlgalaya gabi ahaan gobolada dalka aan warbixinada looga heli karin si joogta ah inkastoo wararka hordhaca ah ee lagu helo teleefoonada ay xaqiijinayaan in weerarada aan kala joogsiga lahayn ee Naftood-hurayaasha ay la beegsanayaan fadhiisimada cadawga uu khasaare laxaad leh ka soo gaadho.
Dagaalada iyo hawlgalada ay CWXO ay ku hayaan gumaysiga iyo dhidid-dhowrka la socda ayaa noqday dhiigbax uu maareyn la’yahay gumaysiga oo ugu dambaynta ku qasbi doonta inuu u soo daadago xaqiiqada.
Hawlgaladii ugu danbeeyay een ka helnay xarunta dhexe ayaa u dhacey sidan;
31/8/2011 dagaal kulul oo ka dhacay ceelka Higlaale-biir oo u dhaxeeya Maramaydh oo ka tirsan Garbo iyo Burqayar oo ka tirsan Dhanaan waxaa cadawga lagaga dilay 7 askari waxaana lagaga dhawaacay 13 kale. Isla maalintan galinkii danbe ayaa hadana dib la isugu farasaaray isla goobtan Higlaale-biir waxaana cadawga lagag dilay 3 askari waxaana lagaga dhawaacay 5 kale.
1/9/2011 Cadalay oo ka tirsan deegaanka Xudur-ayle ee dagmada Qabridahar waxaa fal qorshaysan lagaga dilay cadawga 3 askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale.
1/9/2011 Ganbadhka cadalay dagaal ka dhacay waxaa ciidamada Wayaanaha lagaga dilay 2askari 3 kalana waa lagaga dhawaacay.
2/9/2011 Harleedi oo ku taala duleedka magaalada Barmiil oo ka tirsan degmada Dhuxun dagaal ka dhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawcay 3 kale
3/9/2011 Qarjajabada oo ku taal duleedka magaalada Barmiilka oo ka tirsan degmada Dhuxun ee gobolka Nogbeed dagaal ku dhex maray CWXO iyo kuwa cadawga waxaa cadawga lagaga dilay 2 askarai waxaana lagaga dhaawacay 3 kale.
7/9/2011 magaalada Gurdumi goob lagu uruurinayay ciidan maleeshiya ah ayay CWXO ku duuleen. Dhalintii la soo qafaalay halkii ayaa lagu kala diray waxaan laga qaatet 7ba qori. Dhalinyaradii la soo qabtay ayaa markii la ogaaday in la soo qafaalay la’iska sii daayay.
Waxaa kaloo la soo wariyay dagaalo badan oo mir iyo dhabagal isugu jira oo meela kala duwan ka dhacay oo aanaan wali helin warbixintooda oo tafatiran.